Maitiro Akanaka Kwazvo Ekutumira Email kune Vanokurudzira | Martech Zone
Sezvo isu takadzikwa nehunyanzvi hwekudyidzana neruzhinji zuva nezuva, tinosvika pakuona akanakisa uye akashata emaimendi ekuparidzira maemail. Takagovana kare sei kunyora inoshanda podhi uye iyi infographic ndeyekutevera kukuru uko kunosanganisira kufambira mberi kukuru.
Icho chokwadi ndechekuti makambani anofanirwa kuvaka ruzivo uye chiremera chechavo online. Kunyora zvemukati hazvina kukwana futi, iko kugona kwekukanda kwakakura zvemukati uye nekuita kuti igovewe kwakakosha zvakanyanya kune yega yega yezvinyorwa zvekushambadzira zano. Iwe unogona kubhadhara kukwidziridzwa futi, asi izvo hazvigadzirise zvakasikwa zvataurwa kuti injini dzekutsvaga dzinotarisisa zvakanyanya.
Kunze kwekushambadzira nzvimbo dzakatenderedza kugadzira uye kusimudzira hukama huripo nekuunza mamwe mapato mune yako brand. Kunyangwe nekukwira kwazvino kwenzanga kwemasocial media uye mukati-app kubatanidzwa, email inoramba iri imwe yenzira dzakasimba kwazvo dzekubatanidza mapato echiratidzo chako (kana zvaitwa nemazvo!).
Matanho Ekuvandudza Email Kuparadzira Maitiro
Tsanangura Chinangwa - zvinangwa zvinogona kusanganisira kuvaka chiziviso cherudzi, kugadzira kutengesa, kukurudzira kugovana zvemukati (senge infographic), kuongorora, kubatanidza nharaunda, kana kuita sumo.
Ziva Vateereri Vakananga - urikunangisa mabloggi, varidzi vesaiti, vatori venhau, kutsikisa vanopa, vadzidzi, hurumende, kana isiri purofiti?
Proofread, Test, Dzokorora - Ita shuwa kuti zvinongedzo zvako zvinoshanda, shandisa spell-chaiyo, chengetedza girama chaiyo, uye nyora inoteedzera uye inomanikidza.
ichi infographic kubva Pamhepo Kosi Chirevo inofamba nemitemo yese yakaunganidzwa pamaemail ekusvikira, izvo zvinoshanda, zvisingaite, uye zvekudzivirira zvachose. Izvi zvinosanganisira nguva yezuva, zuva revhiki, mitsara yenyaya, mazwi ekushandisa, huwandu hwekuyedza, kukura kweshoko, nezvimwe. Imwe inonakidza stat yakagovaniswa mune ino infographic ndeye 1 hombe-nguva blogger inowanzo kuve neyakaenzana mhedzisiro ye6 madiki-nguva mabloggi.
Tags: blogger inosvikazuva revhikiemail kuedzaEmail Marketingemail mesejiemail kusvikaemail kuverengaemail kuedzamutori wenhau anosvikahuwandu hwekuyedzaonline kosi mushumooutreachkusvika nzira dzakanakisasaizi yeemail mesejimitsara yemusoronguva yezuva
Kushambadzira Chikamu Chikamu Matambudziko uye Mikana